Izincedisi zeshawari zaseChina abavelisi kunye nababoneleli-i-Huanyu Sanitary Ware
Ikhaya > Iimveliso > Izixhobo zeshawari
Izixhobo zeshawari Abavelisi
Izixhobo zethu zeshawari ziquka izibiyeli zodonga, izahluli zamanzi, iingalo zeshawa, izibiyeli zentonga zeshawa, kunye nezibiyeli zeshawa. Izinto ekrwada esizisebenzisayo zonke CHIMEI, leyo yenye yeenkampani phezulu 500 e China, kwaye sisebenzisa chrome plating kunyango umphezulu. Zonke izixhobo zethu zingathengiswa ngokwahlukileyo. Abathengi baya kuthenga ngokwemarike yendawo.
Ixhotyiswe ngoomatshini abatsha beplastikhi abalawulwa yikhompyutha; Iinkqubo zokuvavanya eziphucukileyo kunye noomatshini bokupakisha abalungileyo, siyakwazi ukukubonelela ngezixhobo zeshawa ezisemgangathweni njengoko kufuneka. Ngokumalunga nokupakisha, silungile ekupakisheni amadyungudyungu kunye neebhokisi zemibala, ewe, sinokubonelela ngokupakisha okukhethekileyo ukuba abathengi banemfuno. Njengomvelisi, sineziko lethu lokubumba, iinjineli ezinamava zilungele ukwenza naluphi na uphuculo lohlengahlengiso olucelwe nguwe ngexesha elikhawulezayo.
Thenga iimveliso kumzi-mveliso wethu obizwa ngokuba yi-Huanyu Sanitary Ware yenye yezona zinto ziphambili Izixhobo zeshawari zabavelisi kunye nababoneleli eTshayina. Umgangatho wethu oPhezulu Izixhobo zeshawari uthandwa ngabantu abafuna ukufumana izinto zorhwebo eziphantsi. Sinemveliso ezininzi kakhulu zokubonelela ngenkonzo yehoseyile. Unokuqiniseka ukuba uthenge ixabiso eliphantsi kumzi-mveliso wethu.